Ogaden News Agency (ONA) – Jaamacada Samara oo Lagubay & Shacabka Canfarta oo Gadoodsan.
Posted by Dulmane	/ January 1, 2017
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Samara ee xarunta u ah Gobolka Canfarta ayaa sheegaya in ay ciidanka sirdoonka ee wayaanuhu ay dab qabadsiiyeen jaamacada magaalada Samara.
Sida warku sheegayo ciidanka sirdoonka wayaanaha oo caan ku ah faldambiyeed yada ayaa si ula kac ah dab uqabadsiiyay xili siq dhexe ah oo ay ardaydu jiifaan gudaha Jaamacada.
Sida aan idiinku soo gudbinay qormooyin kanagii hore waxaa magaalada Samara iyo guud ahaa Gobolka Canfarta kadhacay banaanbax aad ubalaadhan oo ay soo qaban qaabiyeen ardayda jaamacadaha ee Gobolka Canfarta iyadoo ay kasoo qayb galeen dhamaan ardayda Gobolka.
Sida muuqata waxaa si dhakhsa ah jawaab uga bixiyay arintan ciidanka sirdoonka wayaanaha oo u tababaran dhibaataynta shacabka waxayna qaab aar goosi ahaan ah dab uqabadsiiyeen Jaamaca magaalada Samara oo ay ku eedeeyeen in ay ardaydeedu soo qabanqaabiyeen mudaharaadka.
Ma aha markii ugu horaysay ee ciidanka wayaanuhu ay gubeen Iskuul ama Jaamacad waxayna ciidanka gumaysigu bilihii lasoo dhaafay gubeen jaamacadaha Ambo, Jima, Haramayo iyo Iskuulo badan oo kale kuwaas oo dhamaantood ay ciidanka cadawgu si ula kac ah dab uqabad siiyeen.
Sikastaba ha ahaatee is aaminaad darada kala dhex taala shacabka iyo xukuumada wayaanaha ayaa gaadhay meel halis ah oo aan waxba laga qaban karin wuxuuna midba midka kale u arkaa cadawgiisa.